Ọmụmụ ihe na-akwado mmụba nke ọdịda mmiri n'ụdị mmiri mmiri | Netwọk Mgbasa Ozi
Ọmụmụ ihe na-akwado mmụba nke ọdịda n'ụdị nke akụ mmiri igwe
Ọnọdụ ihu igwe na-agbanwe kemgbe ọtụtụ afọ, ya mere mgbe ọtụtụ iri afọ gasịrị, otú ahụ ka ihu igwe na-agbanwe. Nnyocha nke ndị Spanish na French mere lebara anya na ọmụmụ nke ọdịda mmiri n'ụdị akụ mmiri igwe edebara aha na ndịda France na iri afọ gara aga.
E biputara ihe omumu a na akwukwo nyocha nke mbara igwe na mụọ ihe ndekọ banyere akụ mmiri igwe site na 1948 ruo 2015. Kedu nsonaazụ ndị ị nwetaworo na etu ha si dị mkpa?
1 Oke mmiri ozuzo
2 Ihe ndekọ na data
3 Ekele na okpomoku zuru uwa
Ọmụmụ ihe ahụ na-ahụ mgbanwe evolushọn na gburugburu ikuku nke na-akwado mmụba nke ihe omume ihu igwe a, mana ndị nyocha ahụ kwenyere na ihe ndị ọzọ nwere ike imebi ya ma mee ka ha na-abawanye ụba nnukwu ifufe mmiri mmiri, mgbe akụ mmiri ígwé na-esighị ike na-ebelata.
Ebe ọ bụ na ọnọdụ ihu igwe nke na-akụ mmiri ígwé anaghị akwụsi ike ma na-adịghị agbanwe agbanwe na mbara igwe na oge, ọ dị nnọọ mgbagwoju anya inwe nchekwa data zuru oke iji nwee ike ịmụ banyere nzụlite ya na usoro ya.
Nke a na-amụ e rụrụ site ìgwè nke Physics nke ikuku nke Institute of the Environment of the University of León, jYa na Mahadum Complutense nke Madrid na Anelfa, ebe nyocha na Toulouse.
Maka ebumnuche a kpọtụrụ aha n'elu, ọmụmụ ihe a lekwasịrị anya na mpaghara French ebe data na-aga n'ihu ma na-egbochi afọ iri abụọ na ise. Anelfa nwere ihe karịrị ọdụ 25 na-atụle ifufe mmiri. . Site na ebe ahụ, eji usoro ọnụ ọgụgụ eji eme ihe n'ọtụtụ ebe na ọmụmụ ihe ọmụmụ gbasara agbakọ ọnọdụ.
Ihe ndekọ na data
Na mpaghara Pyrenees ugboro nke akụ mmiri igwe abawanyela n'ime afọ 25 gara aga, dabere na mpaghara enyocha. Datesbọchị ndị a enweghị ike ịkọwapụta na mpaghara ndị ọzọ dị nso ebe ọ bụ na ọnọdụ mmiri igwe ojii na-agbanwe agbanwe. Ọ bụrụ na ha bụ mmiri ozuzo n'ụdị mmiri ozuzo, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ịmata usoro mmiri ozuzo nke mpaghara ndị dị nso na ndị enyocha.
N'ịgbalị iru nkwubi okwu siri ike karị na nke nwere ike ịkọwapụta, nyere na Spain enweghị data na-aga n'ihu ma ọ bụ ndekọ ndekọ nke akụ mmiri igwe, ihe achọrọ bụ ịchọta mmekọrịta dị n'etiti ubi ikuku na akụ mmiri igwe.
N’ụzọ dị otu a, ọmụmụ ihe ahụ enyochaala etu ọnọdụ ikuku dị na mbara igwe nwere mgbe ha dịkarịrị ngwa ngwa ma mee ka ọdịdị mmiri igwe ha dị mma. Nsonaazụ akara ihe dị ịrịba ama na afọ 60 gara aga na gburugburu gburugburu ebe dị mma karị ka akụ́ mmiri ígwé wee malite.
Agbanyeghị, ekwesighi ịkọwa omume a dị ka mmụba nke akụ mmiri igwe edenyere aha na ala, ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ ị ga-ebu n'uche, dị ka agbaze nke akụ mmiri igwe na ọdịda ya site n'igwe ojii. Ọtụtụ ihe mmiri ozuzo n'ụdị akụ mmiri mmiri anaghị akwụsị iru ala makana ha na-alaghachi n'ọnọdụ mmiri mmiri tupu ha adaa.
N'ihi okpomoku zuru ụwa ọnụ, gburugburu ebe kachasị mma na ọnọdụ maka oke ikuku mmiri ga-eme na-arịwanye elu. Agbanyeghi na ekwesiri ighota na, ya na okpomoku uwa, ọkwa snow na kefriza na-adị elu. A maara ọkwa a dị ka isozero, ya bụ, ịdị elu ebe a na-ahụ okpomọkụ nke ogo Celsius na site na nke akụ mmiri mmiri na-amalite ịgbaze.
Nke a na - emepụta oke ifufe nwere akụ́ mmiri igwe, mana na ọtụtụ n’ime ha akụ mmiri igwe ahụ na - agbaze tupu ha eruo ala ma sọsọ oke ifufe kachasị nwee akụ mmiri igwe kachasị elu ga - emecha ruo n’elu.
Ekele na okpomoku zuru uwa
Enweghị ike ịma ole ikuku mmiri ga-esi sie ike ị gafere na ndapụta okpomoku zuru ụwa ọnụ, ebe ọ bụ na o siri ike ịkọwapụta ụdị nke usoro a pụrụ ịdabere na ya.
N'ime ikuku dị ọkụ enwere ike karịa maka mgbakọ miri emi ime, nke na-akwado ọdịdị nke oké ifufe nwere ike iji akụ mmiri igwe, mana n'otu oge ahụ, mmụba n'ọkwa nke isozero na-amasị ya ime. agbaze nke mmiri mmiri ahụ na-eme ka o yikarịrị ka ọ ga-akụri ala. O siri ike ịmata onye n’ime ihe abụọ a kacha eme ka akụ́ mmiri igwe gbaa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ọmụmụ ihe na-akwado mmụba nke ọdịda n'ụdị nke akụ mmiri igwe
Mexico na Japan, mba abụọ ala ọma jijiji metụtara
The Píleo Cloud, ọzọ ebube nke elu-igwe